Media Mission Nepal लेख/रचना Archives - Mediamission Nepal
प्रा.डा. देवमणि भट्टराई । नेपालमा मनाइने दोस्रो ठूलो चाड तिहार हो। कार्तिक महिनाको कृष्णपक्षको त्रयोदशीदेखि लगातार पाँच दिनसम्म यो पर्व मनाइन्छ। यो पाँच दिनको अवधिलाई यमपञ्चक पनि भन्दछन्। यमपञ्चक लागेपछि भगवान्
प्रा.डा. देवमणि भट्टराई । कार्तिक कृष्णपक्षको त्रयोदशीदेखि शुक्लपक्षको द्वितीयासम्मका पाँच दिनलाई यमपञ्चक भनिन्छ। यस बीचका देवता यमराज भएकाले यी पाँचै दिनमा यमराजलाई घरको ढोकाबाहिर तुलसाको मोठ छेउमा सन्ध्याकालमा दीपदान गरिन्छ। यमपञ्चकको
नेपाल सम्वत् र गोवर्धन पूजाको महत्व
प्रत्येक वर्ष तिहारको दीपावली मनाएपछि त्यसको भोलिपल्ट नेपाल संवत् फेरिने गर्छ। चान्द्रमानले कार्तिक शुक्लपक्षको प्रतिपदा तिथिबाट ऐतिहासिक नेपाल संवत् परिवर्तन हुन्छ। यो चान्द्रमानमा आधारित संवत् हो। यसर्थ यसमा ३५४ दिनको
उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल । नेपालमा मनाइने दोस्रो ठूलो चाड तिहार हो। कार्तिक महिनाको कृष्णपक्षको त्रयोदशीदेखि लगातार पाँच दिनसम्म यो पर्व मनाइन्छ। यो पाँच दिनको अवधिलाई यमपञ्चक पनि भन्दछन्। यमपञ्चक लागेपछि भगवान्
उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल । मानवजीवनमा खुसी र सुख दिने प्रमुख विषयहरू आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, घर–परिवार अनि समाज नै हुन्। र, तिहार यस्तो पर्व हो, जसले यी सबै वस्तु प्राप्त गर्ने
ऋषिपञ्चमी, ऋषितत्त्व, ऋषिपूजनको महत्त्व र पूजा विधि
प्रा.डा. देवमणि भट्टराई । भाद्र शुक्ल पञ्चमी तिथिमा व्रत बसी सप्तऋषिको पूजा गरिने भएकाले यस तिथिलाई ऋषिपञ्चमी भनिन्छ। यस व्रतमा ऋषिहरूको पूजा गर्न मध्याह्नव्यापिनी तिथि लिनुपर्दछ। ‘पूजाव्रतेषु सर्वेषु मध्याह्नव्यापिनी तिथि’ भनिएकाले दिउँसो
प्रा.डा. देवमणि भट्टराई । भाद्र महिनाको शुक्लपक्षको तृतीयालाई हरितालिका भनिन्छ । ‘हरित’को अर्थ हरण गरिएको र ‘आलिका’को अर्थ साथी हुन्छ। पौराणिक प्रसंगअनुसार भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन पर्वतराज हिमालयकी सुपुत्री पार्वतीलाई विष्णुसँग
बाबुको मुख हेर्ने दिन, कुशे औंसी
प्रा.डा. देवमणि भट्टराई । सनातन धर्ममा कुशको महत्त्व अत्यधिक भएकाले धार्मिक कृत्यमा कुशको प्रयोग गरिन्छ। देवकार्य, पितृकार्यलगायत हरेक धार्मिक कार्य कुशबिना सम्पादन हुँदैन। कुशको पवित्र लगाएर कुश हातमा लिएर सनातन धर्ममा
उद्योगीलाई सरकारले सहयोग गर्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा